Imisa Al-Shabaab looga dilay dagaalkii Bariire iyo Awdheegle? | KEYDMEDIA ONLINE
Imisa Al-Shabaab looga dilay dagaalkii Bariire iyo Awdheegle?
Dagaalka wuxuu ahaa mid culus oo dhowr meel ka dhacay, sidoo kalena ay la socdeen qaraxyo.
AWDHEEGLE, Soomaaliya - Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo ah Taliyaha Ciidanka dhulka Soomaaliya ayaa sheegay in 76 Al-Shabaab ah ay ku dileen dagaalkii xalay ka dhacay Awdheegle iyo Bariire oo kawada tirsan Shabeellaha Hoose.
Wuxuu shaaciyay in weerarada ay iska caabiyeen Ciidankii ku sugnaa degaanada, kuwaasoo dagaal la galay Al-Shabaab markii ay isku dayday inay la wareegto saldhigyadooda xili saqdii dhexe xalay ah.
Taliye Biixi ayaa intaasi ku daray in ay gacanta ku dhigeen iyagoo nool 7 xubnood oo Al-Shabaab ah, kuwaasoo qaarkood qaba dhaawacyo dagaalka kasoo gaaray, lana dhigay Isbitaal.
Dhanka kale, Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ay dileen 100 dagaalyahanno oo ka tirsan Kooxda Argagixisadda Al-Shabaab.
Meesha khasaaraha ugu badan ka dhacay waa Bariire oo qarax Ismiidaamin ahaa iyo dagaal fool-ka-fool ah laga soo sheegay, iyadoo Al-Shabaab u suurta-gashay inay qeybo kamid ah degaanka ay si kooban ula wareegtay.
Al-Shabaab ayaa jidka u gashay intii uu dagaalka socday Ciidan gurmad ah oo Muqdisho ka tagay xili ay marayeen Lafoole, kuwaasoo uu la socday Taliye Odowaa.
Al-Shabaab dhinaceeda waxay sheegtay inay dishay 47 Askari, oo uu ku jiro sarkaal sare oo Dhame C/rashiid Maxamed lagu magacaabi jiray.
Awdheegle iyo Bariire oo qiyaastii 60-100-KM u jira Muqdisho ayaa waxay soo galeen gacanta dowladda sanadkii tagey, waxayna ahaayeen labo degaan oo Al-Shabaab dhaqaale badan ka sameyn jirtay Maxkamado ugu yaallay oo dadka Muqdisho ku nool qaar ay aadi jireen.